Caafimaad hel xilliga wakhtiga magan-gelyada | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / Caafimaad hel xilliga wakhtiga magan-gelyada
Dhamaan dadka ku nool Iswiidhan waxay xaq u leeyihiin inay helaan caafimaad iyo daryeel caafimaad marka loo baahdo - xitaa adigaaga ah magan-gelyo doonka. Boggagan waxaad ka helaysaa qawaaniinta iyo sida aad samaynayso si aad daryeel caafimaad uga raadsato gudaha Iswiidhan.
Haddii aad u baahantahay inaad raadsato daryeel
Adigaaga magan-gelyo ka raadsaday Iswiidhan waxaad xaq u leedahay daryeelka bukaanka qaarkiis iyo daryeelka ilkaha.
Halkan waxaad ka helaysaa warbixin ku saabsan nooca daryeelka aad xaq u leedahay iyo sida aad samaynayso si aad daryeelka bukaanka uga raadsato gudaha Iswiidhan.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan baaritaanka caafimaadka.
Haddii aad xanuusanayso nafsiyan
Xilliga wakhtiga aad magan-gelyo doon ka tahay Iswiidhan waxaad heli kartaa caawimaad iyo daryeel haddii aad xanuusanayso nafsiyan.
Halkan waxaa ku jirta warbixin dheeraad ah oo ku saabsan halkaad ka raadsan kartid caawimaad haddii aad xanuusanayso nafsiyan.
Waxaa jira caawimaad badan iyo daryeel loogu talogalay caruurta iyo dhalinyarada ah magan-gelyo doonka ee xanuusanaysa nafsiyan.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan caawimaada iyo daryeelka caruurta iyo dhalinyarada maskax ahaan xanuusanaysa.
Halkan waxaa ku jirta warbixin ku saabsan khamriga, daroogada, maadooyinka jirka, tobaakada iyo khamaarka (ANDTS)